December 2015 - Vanoda Zvinhu
Posted on Dec 30 Mar 04
Ndakanga ndichangoti tangei kutiwo netsweyi nemboro, apo yakanga yongopota ichimira pose pose apo kana ndaona matako kana zvidya zvefanta kana nyangwe baby rikagara beya. Mboro yangu zvino yakanga yoziva chayakasikirwa. Yakanga yoda kusvira. Mawet dreams akanga owanda. Raiva gore 1997 apo ndakanga ndiri form 2. Taigara neimwe hama…
Haa things never change vakoma ndabvuma hangu murume wese ihure nomatter how much we try to be faithful. I went to Fio after tavhara kubasa and i was staying near CJ Hall uko kune vanoziva Fio. One day ndichidriver hangu i saw this beautiful woman achifamba akabereka mwana.…
Ndakanga ndanzwa nenhomba yekuda chicken ndikati rega ndiende kunotenga huku kwababa vaBill vanogara muraini mangu tingati dzimba ina kubva pamba pangu. Ndakapinda pagedhi ndokunanga kunogogodza padoor ravo, pasina chinguva door rakavhurwa wanike baba vakapfeka kashort, munozivawo kuti ziso harina muganhu, ndakatarisa paburugwa pavo ndikaona zimboro rakadhindikira, rairatidza kuti…
Posted on Dec 28 Mar 04
Uncle Jeri was heavenly handsome yum -candy .Kune varume vakanaka kani imi ndati.He was built like the Greek mythical Gods. Looking back now I think no one ..not even iwewe …..no woman born of man could resist this gawdly image .Uncle Jeri vanga vakaumbwa asikana kunge vanodyiwa and…
“Haaaa tsano musabhaizwe,zvimoko zvakapenga hazvifambe nefootron,,jagwa rinotora muriwo asekuru”..Ndini zvangu ndichitoseka neboyz dzangu apo ndichirova mahazards ndakamira paside peroad.Pandakangoti baa kuona muvakirwo waanga akaitwa ndakavhunduka zvekuti brain dzakatomboruza apo hana ichirohwa nehana. PaJozi hapana kumira mushe varume,pamabhebhi chete ,haaa havaudzirwe!!Ndakazozvishingisa zvangu nekuda kwechamvari cheAudi RS4 garimoto chandainge ndakagarira.”Kunjani…
Ini ndirimurume anemakore 52, ndinogarisana nemukadzi wangu zvakanaka nemwana wedu musikana.Ndava nenguva ndisingachazive musuwo webeche, mukadzi wangu akanga asisanzwe kunaka kwemboro,pamwe kunekwakanga ava kuiwana hameno. Ini ndaive ndorarama nebonyora zvangu.Zvakazoitika manje ndoma1 apa mwana wangu akauya neshamwari yake kumba kwedu.Mwana uyu aiva akaumbwa chose,runako rwemwana uyu rwaimisa moyo…
Posted on Dec 27 Mar 04
Ndaiva ndakuvara nezemo umwe musi iri Thursday kubasa ndokutanga kutaurawo neimwe shamwari yangu pawhatsapp ndichitomuudzawo zvezemo rangu. Kuti ndiwane angandisvira kwainetsa sezvo mukomana wangu aiva achangondiramba saka ini ndaiva ndichida kufadzawo nyama dzangu semunhu aiva ajaira mboro. Shamwari yangu akabva andi inviter kumba kwake kuti timbotandara zvedu nefriday…
Ndakaroorwa at the age of 36 and my hubby was a doctor so was I.Wet met kuStates where we were doing our Medical doctorates. We came back to Zim where we had our wedding.Hama dzangu kushaya mbereko chinhu chakaoma.After the marriage 6 years went by without conceiving,munongoziva people…
Pandakdzokera ndakawana mumwe musikana aiwonekera. Takatanga kutaura hedu zvisina maturo kwekanguva. Musikana akanditi anonzi Molly ini ndikamuudza kuti ndinonzi Rombe. “Inga wakapihwa zita rine miyedzo” “Ichokwadi” ndakapindura, “asi harisi zita rangu chairo, izita rekuhurisa, asi ndatogara naro kwetumakore” Molly akaseka kunge benzi apa achishamisika “A iwe Rombe, inga…
Posted on Dec 24 Mar 04
Haa zvekuti I am a married woman zvakapera zvese ndaona chimboro chababa ava chaive chipfupi asi chakakora chine zimusoro rinenge bhuru mango kukura. Ndakanyepera kuramba asi all I wanted was kuti vandinyengere, ivo vakazviona kuti yaive bhaizi kuramba ndonyikidza zimboro riye mukati. Size does matter but it’s not…